Calaamadeeyaha Label, Sanduuqa Hadiyadda, Sanduuqa Kaydinta Waraaqaha - Huaguang
Si macaamiisha loo siiyo adeeg wanaagsan iyo wax soo saar tayo sare leh. Dadaallada, wanaagsan, kor u kaca, danaha gaarka ah, iskaashiga guul-guuleysiga.
KU SAABSAN News
Midabka logo daabacaadda midab logo 350g cad c ...
Xirxirida sanduuqa Kaararka ayaa si ballaaran loo isticmaalaa. Tusaale ahaan, warshadaha cuntada, waxaa kujira sanaadiiqda kaararka kafeega, sanaadiiqda kaararka nacnaca, sanaadiiqda kaararka buskudka iyo wixii la mid ah. Warshadaha quruxda ayaa badan, sida sanduuqa kaararka lipstick, sanduuqa kaarka maaskaro, sanduuqa kaarka toner iyo wixii la mid ah; Waxa kale oo jira warshadaha kabaha iyo dharka, sida sharaabaadyo, dhar, nigis IWM. Marka la barbardhigo sanduuqa hadiyadda, sanduuqa kaarka ayaa ka jaban, sanduuqa kaararka waa la laaban karaa, taas oo si weyn u badbaadinaysa kharashka gaadiidka. Sanduuqa kaararka ayaa u fiican sida hadiyadda ...
Sanduuqa warqadda ee daryeelka maqaarka waxaa lagu dhejiyaa warqadda 'PVC Book typ' ...
Horumarinta iyo cusbooneysiinta tiknoolajiyada iyo qalabka, habka wax soo saarka ee baakadka sanduuqa hadiyadaha ayaa si fiican u bartay shirkado badan. Adeegsiga tikniyoolajiyad cusub ayaa si weyn u wanaajiyey waxsoosaarka wax soo saarka, qalab cusubna si tartiib tartiib ah ayuu u beddelay hawlgalkii gacan yaraa ee daallanaa. Kordhinta softiweerka iyo qalabka qalabka ayaa kor u qaaday tayada wax soo saarka. Nooca sanduuqa hadiyadaha noocyadiisa kala duwan, laga soo bilaabo qaab dhismeedka kor iyo hoosba oo isku jira dabool iyo foomka daboolka salka, em ...
Sanduuqa faylka majaladda jiingado waa mid ka mid ah sanduuqyada faylasha badan. Waa sanduuq furan oo badanaa ay u isticmaalaan shaqaalaha xafiisku kaydinta iyo kala soocidda. Way fududahay in la keydiyo oo la qaado faylasha. Badanaa dukumiintiyo badan ayaa xafiiska yaala. Qaarkood waa muhiim oo si isdaba joog ah ayaa loo isticmaalaa. Waxaa jira tixraacyo, mararka qaarkood loo tixraaco; Qaarkood waa dhif in loo baahan yahay waxayna badanaa fadhiistaan ​​bilaa camal. Haddii dukumiintiyadaas oo dhan la isu geeyo, waxay noqdaan kuwo nidaamsan oo aan sahlaneyn inaan eegno. Tani waa halka faylka faylka ...
Sanduuqa ay wax ku jiraan, oo ah wax (waxyaabo badan ayaa tilmaamaya maqaal yar, wuxuu noqon karaa: xafiisyada xafiisyada, is qurxinta, xogta faylka, qalab yar, sharaabaadyo, surwaal iwm) ayaa la isu soo uruuriyaa, sida magaca ka muuqata loogu yeero kaydinta sanduuq. Sanduuqyada wax lagu keydiyo, oo sidoo kale loo yaqaanno sanduuqyada qadiimiga ah, ayaa waxaa adeegsan jiray kooxaha qadiimiga ah maalmihii hore si ay ugu kaydsadaan qaybo ka mid ah waxyaabaha dhaqameed ee la qoday oo la kala soocay. Sanduuqyadan guud ahaan si adag ayaa loo tiriyey, qaar waa weyn yihiin qaarna yar yihiin, laakiin badankood waa cabirka sanduuqa kabaha.
Logo kartoo daabacan kartoon Gi ...
Daabacaadda, waa badeecooyin kala duwan oo daabacan, oo ku dhowaad ka buuxa dharka dadka, cuntada, guryaha, safarka berrinka, iyo nolosha dadka oo aad ugu dhow. Waa maxay qiyaasta qaybo ka mid ah qaybaha nool? Ma aha oo kaliya in la arko in midabka daabacaaddu ay waafaqsan tahay shuruudaha, laakiin sidoo kale in la arko haddii qaybtan khadadka nool ay xasilloon tahay. Maanta, Iyada oo ku saleysan sanduuqa hadiyadeed, waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago dhowr arrimood oo saameyn ku leh xasilloonida midabka khad: Saamaynta muuqaal ee khad ...
Sameynta iyo soo saarida sanaadiiqda dahabka waxay ku saleysan yihiin ikhtiraaca dahabka. Gudaha guud ahaan waxaa loogu talagalay kala-dheellitirnaan fara badan si looga hortago xagashada aan loo baahnayn ee ay keento taabashada dahabka. Sanduuqyada dahabka qaarkood waxay ku kala duwan yihiin qaabdhismeedka gudaha iyadoo loo eegayo qaababka iyo walxaha gaarka ah. Adeegsiga ugu weyn ee sanduuqa dahabka, si loo ilaaliyo dahabka oo u eg saameyn muuqaal cusub, looga hortago boodhka iyo walxaha ku jira hawada dusha sare ee dahabka iyo xirashada, iyo sidoo kale sii ururiyayaasha dahabka ...
Shandadan waraaqda ah ayaa inta badan loo isticmaalaa in lagu duubo hadiyadaha carruurta ama loo abaabulo agabyada yaryar ee carruurtu ku ciyaaraan. Codkeeda ugu weyn waa buluug iyo caddaan, naqshada qaabka dhibcaha mawjadaha, waxay u egtahay nadiif, raaxo iyo qurux badan, aad ugu habboon carruurta. Iyo isku midabeynta midabka noocaas ah, kama caawin karo laakiin waxaan rabaa inaan ka gudbiyo shandadan warqada shandada, sababaha aan soo sheegnay ee saameynaya midab bedelka sheyga la daabacay. Ku daabac nidaamka daabacaadda iyo keydinta, midabkiisa, fudeydkiisa, dhererkiisu inta badan wuu is beddelaa, ...
Kartoo sanduuqa hadiyad qaab wareega la tayo sare leh ...
Naqshadaynta baakadu waa sahamin firfircoon oo adduunka ah oo leh aragtida muuqaalka oo ah xarunta iyo afarta kale ee dareemayaasha ah sida kaaliyaha. Nolosha, badeecad kastaa waxay si xoog leh u kicisaa dareenka dadka siyaabo kala duwan, taasoo keenta rabitaanka wax iibsashada. Waxaa la dhihi karaa in soo jiidashada baakadu ay tahay bulsho casri ah oo adeegsanaysa "shanta dareen" halkii ay ka ahaan lahayd suuq geyn soo jiidasho leh. Maanta, aan ka hadalno naqshadeynta baakadaha iyada oo loo marayo sanduuqa hadiyadeed ee wareega ah: Aragtida ayaa ah xarunta farshaxanka iyo des ...
Qaadashada: kuwaas oo ah xulan qalabka baakadaha ku habboon, naqshadeynta baakada iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad xariif ah, loogu talagalay xirxirida alaabta qaabka qaab dhismeedka weelka iyo qurxinta naqshadeynta qurxinta xirmooyinka, illaa midabka baakadka, qaabka, walxaha iyo wixii la mid ah nooc kasta oo naqshad ah luqadda, waxay siineysaa badeecadda shakhsiyad gaar ah, laakiin sidoo kale sameynta muuqaal muuqaal ah oo dhammaystiran oo sheyga ah, maadaama shuruudaha looga baahan yahay macaamiisha ay xukumaan tayada sarreenka ka soo baxa buunshaha, sha ...
Waxaa jira qaabab badan oo ubaxyo ah, waxaan siin doonaa dad kala duwan iyadoo loo eegayo noocyo kala duwan, muujiyaan macno kala duwan. Xitaa haddii fahamka ubaxyadu uusan ahayn mid qoto dheer, dadka casriga ahi asal ahaan way ogyihiin inay ubax diraan kuwa jecel, carnations odayaasha, iyo ubaxyada asxaabta. Waxaa jira bouquet, dambiisha gacanta, dambiilaha shelf, baakadaha sanduuqa ubaxa, mid kasta wuxuu leeyahay door iyo saameyn kala duwan. Tusaale ahaan, kiiskeyga, waxaan jeclaan lahaa inaan helo ubax ubax maalinta jaceylka, oo ah v ...
Waxaan u baranay inaan ku dhajino nigiskeena ama sharaabaadkeena khaanad, laakiin way fududahay in la khalkhal geliyo. Sanduuqyada wax lagu keydiyo ayaa ka fudud kala-soociddooda, way fududahay in la abaabulo, iyo nadaafad badan si loo ilaaliyo dharka hoose iyo sharaabaadyada. Si kastaba ha noqotee sanduuqa keydinta waraaqaha ee suuqa waxaa ka buuxa waxyaabo qurux badan indhaha, dooro sanduuq runti ku habboon waa mid aad muhiim u ah, haddii kale waxaa laga yaabaa inaysan wax caawimaad ah lahayn, ama xitaa ka sii xasilloonayn. Gaar ahaan haddii aad leedahay qoys ballaaran, waxaa jiri doona wax badan dharka u baahan sanduuqyada keydinta warqadda. Noqo ...
Dhibcaha Xakamaynta Tayada Xaraashka kulul ee saddex-geesoodka ah iyo Cilladaha Daaweynta
Ku dhufashada shaabad kulul oo saddex-geesood ah waa isku-darka saamaynta kuuskuusku riixayo iyo ku tumashada kulul, taas oo leh anti-been-abuur wanaagsan iyo saameyn farshaxan, sidaa darteed si ballaadhan ayaa loo isticmaalay. Laakiin xakamaynta tayada shaabbadda kulul ee saddexda geesood ah waa dhibaato isku dhafan. Waraaqdan ayaa si kooban u sharraxaysa ...
Maxaad ka ogtahay xirmada sanduuqa hadiyadaha dhamaadka-sare?
Ku saabsan qeexida sanduuqa hadiyadaha dhamaadka-sare, xitaa haddii raadinta Google, sidoo kale ma lahan qeexitaanno sax ah, qeexitaanka qof walbana wuu ka duwan yahay, qodobkaan wuxuu ka hadlay sanduuqa hadiyadaha sare, badanaa loogu talagalay sanduuqa dhajinta, oo u baahan geedi socod badan , oo waxaad ubaahantahay sanduuq dhejis ah oo faahfaahsan, nuxurka f ...
Xirxirida Aqoonta Maadiga ah: Fahmaan astaamaha waraaqaha, hagaajinta tayada baakadaha iyo daabacaadda
Abstract: Waraaqda ayaa ah tan ugu badan ee loo isticmaalo daabacaadda daabacaadda. Hanti ahaan jir ahaaneed waxay saameyn toos ah ama mid aan toos ahayn ku leedahay tayada daabacaadda. Faham sax ah iyo hanashada nooca warqadda, iyadoo la raacayo astaamaha wax soo saarka, adeegsiga macquul ee warqadda si loo hagaajiyo ...